Impilo | Eyenkanga 2021
Imfundo Yezempilo, Impilo Ulwazi Lweziyobisi Impilo-Ntle Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya Ukuzonwabisa Ukuphuma Imidlalo Enzima Impilo Uluntu, Inkampani Iindaba, Impilo Imfundo Yezempilo, Iindaba Iindaba Iziyobisi Vs. Umhlobo Inkampani, Ukuphuma Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo
Amanqaku abaLindi aManqaku okuBala: Isixhobo seSimahla se-Intanethi
Sebenzisa ezi zixhobo zasimahla kwi-Intanethi kwisidlo sabaLindi
UGqr Oz Detox: Iresiphi yesiselo esiluhlaza
Ugqirha Oz uthanda iijusi eziluhlaza, kwaye le yenye yeendlela zakhe zokuqala onokuzisebenzisa njengesiseko. Le detox ijusi eluhlaza izele iivithamini kunye nezakha mzimba.
Izihlalo ezinamavili ezingasindiyo: Thelekisa, Thenga kwaye ugcine
Ukuba wena okanye umntu omthandayo unengxaki yokuhamba, izitulo ezinamavili ezilula ziyindlela efanelekileyo yokuhamba, ukwenza ukuhamba kukhuselekile kwaye kulula.
Ukutya kweQuinoa: Njani le Superseed Aids ekulahlekeni kobunzima
Iquinoa kukutya okuphulukene nobunzima obusemgangathweni obongezelelekileyo kwindlela otya ngayo, kwaye iyakuthanda kakhulu kwaye ihamba nayo yonke into. Ulwazi lwezempilo kunye neengcebiso.
Ipilisi yokutya entsha iyanda ibe 'yiBhaluni' kwisisu sakho
Yintoni le 'pilisi yomlingo' abantu abaya kuyokuthenga eMexico? Ibizwa ngokuba yi-Obalon kwaye iyakuzalisa ukuze unciphise umzimba. Fumana zonke iinyani kunye nolwazi apha.
Zonakalise kunye nabo bakuluhlu lwakho lwesipho ngebrashi yamazinyo yombane ngeCyber ​​Monday. Isivumelwano se-cyber ngoMvulo sishushu kulo nyaka ungaphoswa.
Ezona ziKhowudi zoVavanyo lweDNA zibalaseleyo: Yeyiphi efanelekileyo ekuLungeleyo?
Fumana okhokho bakho kwikhithi yovavanyo lwe-DNA ekhaya. Siqokelele iinkonzo ezisibhozo ezilungileyo, kubandakanya iimvavanyo zelifa lemveli, iimeko zonyango, nokunye okuninzi.
UMSEBENZI: Ukuhamba kweYoga ukunciphisa umzimba
Zama le vidiyo yemizuzu engama-40 yasimahla yokutya ekhaya ukuze unciphise umzimba, ukonyuse imetabolism, kunye nokuzilolonga iingalo, imilenze, ingqokelela kunye ne-abs. Eyona yoga ibonakalayo.
I-11 yeeOximeter eziPhezulu zoPhuculo lokuZinakekela
Nokuba ujonge ukuphucula ukusebenza kwezemidlalo okanye ufuna nje ukugcina iithebhu kwimpilo yakho iyonke, i-oximeter yokubetha sisixhobo esilula ukunceda.
Eziphezulu ezi-5 eziPhezulu zokuNcipha kokuTyelelwa kweNdalo
Kukho okuninzi kakhulu ukunciphisa umzimba kunye nezongezo zokutya phaya, kodwa ezinye zezona zinto zisebenzayo zokunciphisa umzimba sele zixhomile ekhitshini lakho.
Ngaba utya ukutya kukaCaveman? Uluhlu lokutya okuvunyiweyo kwePaleo
Ukuba ulandela ukutya kwePaleo, Primal, okanye iCaveman, uya kutya inyama, intlanzi kunye nokutya kwaselwandle, amaqanda, iziqhamo ezintsha, imifuno emitsha, amandongomane, iimbewu, kunye neoyile esempilweni.
Ukutya kweCandida: Iinyani ezi-5 eziKhawulezayo ekufuneka uyazi
ICandida icoca ukutya- kukutya ekufuneka kukutya kunye nokuphepha. Ukugqithisa kweCandida kunokuba sisizathu sokudinwa, isifo sokwala kunye neminqweno. Fumana iinyani apha.
18 Iiglasi zeAloe Vera eziGqwesileyo zokwenza iSanitizer yesandla
Ukuba unengxaki yokufumana i-sanitizer yesandla, yenza eyakho ngokudibanisa i-aloe vera gel kunye nokuhlikihla utywala. Lo mxube wokubulala iintsholongwane yi-CDC kwaye ugqirha ugqityiwe.
Umsebenzi oSisiseko: Imizuzu eli-15 ukuya kwi-Steel Sika i-Abs
Olu qeqesho lokuzilolonga lusisitshisi, ke qala ngokucotha ukuba ubukhe wangakhathalelwa phakathi kwendlela yakho. Ukusebenza kumbindi wakho kubaluleke kakhulu empilweni yakho.
Isidlo seNutrisystem: Iinyani ezi-5 eziKhawulezayo ekufuneka uyazi
Uzibonile iintengiso zendlela yokutya yokunciphisa umzimba yeNutrisystem, kodwa kunjani ukutya? Funda ukuze ufumane zonke iinyani kunye nezinto eziluncedo kunye nezibi emva kwesi sidlo sithandwayo.
Iti yeTurmeric: Iresiphi yeSiselo esiPhezulu yokuSela
Amayeza aseNtshona abambelela kwiipropathi zokulwa nokudumba kunye nokulwa nomhlaza. Zama le ti ye-turmeric kwaye wonwabele isiselo esimnandi, esise-uber esisempilweni.
UKevin Trudeau Unetyala Lokukhohlisa: Iinyani ezi-5 eziKhawulezayo ekufuneka uyazi
U-Kevin Trudeau wagwetywa iminyaka eli-10 entolongweni ngokurhwaphiliza uluntu ngamabango akhe okunciphisa umzimba. Nantsi into ekufuneka uyazi malunga nokukholelwa kwakhe.
I-5 yokuSebenza ngokuPhambili kwaBasetyhini: Isikhokelo sakho sokuthenga
Ngaba awuyifumani inkuthazo? Thatha ukuzilolonga kwangaphambili kwabasetyhini ngaphambi kokuba ubeke iblukhwe yakho yeyoga. Nazi ezona zixhobo zibalaseleyo zangaphambi kokuzilolonga ezilungiselelwe abantu basetyhini ngo-2019.
5 Amanzi eProtein aPhambili okuKwenza ukuba usebenze
Ngaba ukhe weva ngeprotein yamanzi? Esi siselo sempilo siya sithandwa kakhulu njengoko iimveliso ezinkulu zingena kwindlela. Khetha awona manzi alungileyo weprotheni!
Ngaba ngokwenene umdlalo wamanqindi ngumlenze kunye nokuzilolonga?
UBen Hart unika izikhombisi ukuba ziqeqeshe njengomphathi wamanqindi kwaye uqaphele ukuba ungakanani umlinganiso womlenze owufumanayo xa umlo wamanqindi ubunakho.
Iiprobiotic zokuthintela usulelo lwegwele ngelixa uthatha i-antibiotics
yintoni ixabiso eliqhelekileyo leswekile yegazi
Uyintoni umahluko phakathi kwemethylprednisolone vs prednisone
Ungathatha i-loratadine kunye ne-diphenhydramine kunye
isebenza njani ngokuchasene nokulahleka kobunzima
malunga nepesenti yabantu abadala baseMelika abonwa njengabatyebe kakhulu